Top 5 Fitadiavam-bahaolana momba ny fikarakarana
Ny fifaninanana fanatanjahan-tena amin'ny fanatanjahan-tena dia manolotra ny sasany amin'ireo tsara indrindra amin'ny TV. Mahafaly anao ny miarahaba ireo mpifaninana amin'ny ady samy hafa (ary ny tebiteby rehetra, ny zomangia sy ny fialamboly izay miaraka aminy) dia afaka mahita ny vahaolana vaovao ho an'ny fanamby. Ambony lavitra noho ny famoriam-bola rehetra ny famoronana farany.
Ireto ny fifaninanana mahandro dimy tsara indrindra amin'ny fahitalavitra:
Hatramin'ny taona 2006, nirotsaka an-tsehatra ireo mpilatsaka an-tsokosoko ireo Bravo izay mifaninana amin'ny fanamby izay mandinika ny fahaiza-manaony sy ny fahaiza-mamorona. Mpitsara maromaro telo sy fanamby miavaka no mampiseho ny famoronana manatanteraka ny fandaharana.
Ny fizarana tsirairay dia manasongadina ny olan'ny Quickfire sy ny Elimination. Ny mpankasitraka ny fananana dia ny Restaurant Wars, ny fanamboarana fanesorana izay misy ekipa roa mametraka trano fisakafoanana pop-up. Ireo tompon-daka telo farany amin'ny vanim-potoana dia mifaninana amin'ny farany mba hahazoana vola 200 000 $ (teo aloha $ 100,000) ary singa fanoratana ao amin'ny Food & Wine Magazine .
Raha ny Top Chef kosa dia mifantoka amin'ny sefo, mpiandraikitra matihanina, ny MasterChef Fox dia manatsara ny mpilalao am-bovoka sy trano fidiovana. Zato tapitrisa no mahandro sakafo ny marika famantarana, fa efatra ambin'ny folo kosa no tena hifaninana. Ireo mpifaninana dia tsy maintsy miatrika ireo fanamby toy ny fisakafo miaraka amin'ny sakafo hafahafa ary mamerina sakafo tsy mahazatra. Mpitsara ny mpamboly Joe Bastianich; chef Graham Ellio ary mpiara-mianatra, chef Gordon Ramsay, chef de Hell's Kitchen .
Raha te haka sary an-tsaina ny Chef Chef Gordon Ramsay, fanta-daza manerantany fa be fitiavana izy, dia tandremo MasterChef . Raha tianao ny mijery ny asidra, ny kiraro mitsikitsiky Ramsay dia mametraka mpiantoka mitaingina amin'ny fanamby tsy manam-paharoa ary avy eo dia marin-toetra amim-pahamarinana amin'ny fanombanana ny fahadisoany - ary rehefa miteny aho hoe 'marina' dia midika hoe 'manimba' - dia ny Hell's Kitchen no fampisehoana ianao. Misy antony iray raisiko ho an'ny MasterChef ambony kokoa: reraky ny fanararaotam-pitenenana izay mandalo noho ny tsikera. Na izany aza, misy zavatra tsy azo lavina fa mandresy lahatra ny fifaninanana fifaninanana Fox na tsy ho tafavoaka velona nandritra ny fotoana maharitra.
'The Iron Iron Chef
Ny Iron Chef manaraka dia fanesorana ny Iron Chef America an'ny Food Network, ary manome lohan-daba folo mahomby ho an'ny fanamby ara-tsakafo any an-toerana manerana ny tany. Ny farany dia mametraka ny mpifaninana roa mifanohitra ao amin'ny Food Network's Kitchen Stadium, izay anambaràn'ny mpandresy anà Iron Chef vaovao ary afaka hifaninana amin'ny Iron Chef America .
Ny maso fanao taloha ho an'ny lehilahy tomady Guy , manam-pahaizana manokana, Ted Allen, dia manomana ny fifaninanana mihinana sakafo mahazatra, izay misy ny chefs mifaninana amin'ny sakafo mahandro sakafo telo. Ny tora-po - fa ny lalana tsirairay dia tsy maintsy mampiditra fitaovana avy ao anaty boaty mistery - dia mitarika ho amin'ny fambolena mahafinaritra amin'ny maha-chefiana tolona amin'ny fampidirana zavatra toy ny Animal Crackers sy algée. Manana endri-tsakafo miady ho an'ny mpiara-misakafo isan-karazany ihany koa izy, ka ny mpijery dia tsy manana ny fahafahana hahafantatra azy ireo na hiorim-paka amin'ny fankasitrahana amin'ny vanim-potoana feno.
Fanambarana mendri-piderana: Mihodina
Tahaka ny ankamaroan'ny sarimihetsika dia tsy mahomby ny mamerina indray ny fahagagan'ny mpialoha lalana azy ireo. Saingy misy vitsivitsy izay nahavita nandresy ireo fepetra. Ireto misy fifaninanana telo mahatsara fikarakarana mahandro toy ny fampisehoana izay nahatonga azy ireo:
Top Chef: Tsindrin-java-poana fotsiny : fialantsasatra kely avy amin'ny Top Chef - na aiza na aiza taorian'ny fizaran-taona, ireo chefs dia nesorina tamin'ireo tsindrin-tsakafo tsy nahomby - ity fifaninanana ity dia manatsara ny famokarana amboara.
Iron Chef America : Azo antoka, ny Iron Chef Amerikana no niteraka ny Chef Iron Next , saingy talohan'izay dia izy io dia fialana amin'ny Japoney voalohany. Izy io dia mampiavaka ny fisakafoanana eo amin'ireo mpiompy tsara indrindra any Amerika, anisan'izany ny Cat Cora sy Bobby Flay.
Top Chef Masters : Toy izany koa ireo kintana Top Chef ireo kintana renirano manerantany fanta-daza. Herinandro isan-kerinandro dia mifanohitra ny fifaninanana, ary ny iray dia nesorina mandra-pahatongan'ny farany izay ahitan'ireo chef hafa sisa tavela ho an'ny loka goavana $ 100,000 (izay omena ny fitiavana avy amin'ny safidiny).
Ny fahitalavitra Top 8 dia mampiseho ireo mpandala ny nentin-drazana
5 Fomba tsotra hianarana ho an'ny kilalao dia asehoy ny fisehoany
Ny valin-teny manan-danja 8 isan'andro dia mampiseho ny tompony
Fantaro ny fomba hahazoanao maimaim-poana amin'ny "Jimmy Kimmel Live" Show
Resaka mivantana na fandefasana lahatsary any Los Angeles
Fantaro hoe ohatrinona ny kintana
Ny ankamaroan'ny Shakespearean amin'ny "Star Trek"
College Hill Cast Reflects mikasika ny zava-niainany TV Experience
'Minitra handresena an'io' Elefanta March Game
Namaly ny fanontaniana Kardashian
Manaova fampiharana amin'ny fikarakarana andininy iray
Nahoana no tsy mipetaka eo amin'ny ao anaty tavoahangy?
Inona no tena ilain'ny mpianatra?
Inona no dikan'ny firaisan-kina eo amin'ny matematika?
Alefaso ny "Green Forever" ho an'ny tontolo iainana
Mianara momba ny Kongresy Viet
Ahoana ny fahasamihafana eo amin'ny fianarana ambaratonga ambony amin'ny College?
Inona no atao hoe Bleach sy ny fomba fiasa?
Miezaha hahalala ny zava-bitanao amin'ny sainao
Ahoana no hanamboarana kitapom-bary mila kitay?
Fifehezana any an-tsekoly
Fialan-tsasatra sy fanaovana baolina kitra
Asa natokana ho an'ny tetikasa Acid & Base Science
Ratsy ve i Constantin Lehibe?
Inona no tokony atao rehefa tsy mahomby ny teknolojia
Ny Nosy Anglisy-German Naval
Manao ahoana ny habibiana malemy?
Toro-hevitra lehibe ho an'ny trano tokana tokana
Hypotaxis amin'ny teny anglisy
Fetin'ny Tabernakely (Sukkot)
10 Fakan-tsary momba ny Nickel